नेपाल टेलिकमलार्इ दाङवासीकाे प्रश्नः नारायणपुरका टेलिफाेन कहिले बन्छन् ?
दाङ । अगष्ट २२ तारिख अर्थात भदौ ६ गते पशुपति विद्याश्रम नारायणपुरका प्रिन्सिपल केशव थापाले श्री नेपाल दुरसञ्चार कार्यालय, नारायणपुरमा बिग्रेका ल्याण्ड लाइन फोन कहिले बन्छन् ? भनेर फेसबुकमा स्टाटस लेखे । थापाले भदौ ६ गते बिहान ९ बजेर १४ मिनेटमा स्टाटस लेखेका हुन् ।
थापाले विद्यालयमा रहेको ०८२—५३०२२३ नम्बर करिब डेढ महिनादेखि बिग्रेपछि मर्मतका लागि आग्रह गरे पनि मर्मत नभएपछि स्टाटस लेखेको बताए । पशुपति विद्याश्रम, डोक्रेना चोक आसपासका ल्याण्डलाइन फोनमा समस्या देखा परेको बताए । टेलिफोन बिग्रेको लामो समयसम्म पनि दुरसञ्चार कार्यालयले मर्मत नगरेपछि फेसबुकमा स्टाटस लेख्न परेको बाध्यता सुनाए ।
यस्तै सिद्धरत्ननाथमा अध्यापन गराउँदै आएकी सरिता देवकोटाले अगष्ट २३ अर्थात भदौ ७ गते घरको ल्याण्डलाइन बिग्रेको भन्दै मर्मतका लागि आग्रह गर्दा पनि मर्मत नभएपछि फेसबुकमा लेखेको प्रतिक्रिया दिइन् ।
घरमा ल्याण्डलाइन फोन बिग्रेपछि देवकोटाले डेढ महिनादेखि फोन गर्न र नेट समेत चलाउन नपाएको बताइन् । दुरसञ्चार कार्यालयको लापरबाहीका कारण नारायणपुर क्षेत्रका ५० बढी ल्याण्डलाइन फोनका ग्राहकहरुले समस्या भोग्नु परेको देवकोटाले बताइन् ।
बिग्रेका टेलिफोन मर्मत गर्नका लागि १९८ मा कमेन्ट गरिएको छ । दुरसञ्चारमा समस्या राखिएको छ, कतैबाट सम्बोधन गरिएको छैन । समयमै जानकारी गराउँदा पनि दुरसञ्चारले मर्मत नगरेपछि झनै समस्या भएको थापा र देवकोटाको भनाई रहेको छ । तत्काल टेलिफोन मर्मत गर्न थापा र देवकोटाको भनाई छ ।
थापाले टेलिफोन मर्मत नहुँदा विद्यालयमा काम गर्न समस्या भोगेको बताएका छन् भने देवकोटाले टेलिफोन बिग्रेपछि ईन्टरनेट चलाउन नपाएको बताइन् ।
पहिले नारायणपुरमै रहेको दुरसञ्चारले मर्मत गरे पनि हाल तुलसीपुरबाट मात्रै मर्मत हुने भएकाले समस्या भएको नारायणपुर क्षेत्रका ग्राहकको भनाई रहेको छ ।
यसैबीच नारायणपुर क्षेत्रको टेलिफोन बिग्रेको बारेमा जानकारी लिन खोज्दा दुर सञ्चार कार्यालय तुलसीपुरमा सम्पर्क हुन सकेन । कार्यालयको ०८२—५२००४४ मा फोन गर्दा उठेन ।
कार्यालयले जिम्मेवारी बहन नगर्दा नारायणपुर क्षेत्रका ग्राहकले समस्या ब्यहोर्नु परेको छ । देबकोटाले यसका बारेमा दुर सञ्चार कार्यालयका कर्मचारी जानकार भए पनि मर्मतमा चासो नदिएको बताइन् ।
‘हात—हातमा मोबाइल, घर—घरमा ईन्टरनेट’ नारालाई सरकारले लगाइरहँदा गरिरहेको समयमा नारायणपुर क्षेत्रका घर तथा कार्यालयमा जडान गरिएका टेलिफोन महिना दिन बितीसक्दा समेत मर्मत नगर्दा कतै त्यही नारालाई गिज्याएको त छैन ? त्यसैले ग्राहकले मर्मतका लागि कमेन्ट गर्दा पनि ध्यान नदिने कार्यालयले सरकारी नारा फेल हुने खतरा देखिएको छ ।